श्याम किराँती का केही मुक्तकहरूः | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका श्याम किराँती का केही मुक्तकहरूः – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
भुल्छौ भने भुलिदेऊ भन्नू केही छैन!!
उस्कै ‘बाग’मा फुलिदेऊ भन्नू केही छैन!!
बिन्ती छ हिजो आज पागल जस्तै भा छु,
छेउ छाउ नडुलिदेऊ भन्नू केही छैन!!
यो जिन्दगी जसोतसो चलेकै छ हजुर !!
साँझ बिहान चुल्हाचौका बलेकै छ हजुर !!
चाहिएन धनकै रास यति भए पुग्छ मलाई,
ढिँडो रोटो साग सिस्नु गलेकै छ हजुर !!
भो नसोध के छ? भनी हाल जिन्दगिको
भत्किसक्यो लथालिङ्ग पर्खाल जिन्दगिको ।
हिजो आज बालुवामै हर दिन सिन्चित हुन्छु,,
फर्किन्न कि भर न पर कंकाल जिन्दगिको ।।
भीर भत्केर टारबारी भएँ भने के गर्छौ ?
सोचे भन्दा इमानदारी भएँ भने के गर्छौ ?
सँधै भरी तालु खुइले नभन है मलार्इ,,
हेर्दा हेर्दै जट्टाधारी भएँ भने के गर्छौ ?
This entry was posted in टुक्रे कविता, मुक्तक and tagged Kirati, Pallawa, Shyam, पल्लव, श्याम किराँती. Bookmark the permalink.
← टीका सापकोटा का केही मुक्तकहरूः
One thought on “श्याम किराँती का केही मुक्तकहरूः”
सुन्दर अनि खादिला भावहरु भएका मुक्तकहरु थिए मित्र श्याम जि का यी सृजना हरु पढन पाएर खुशी छु।